LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်နိမိတ်လက္ခဏာ၏ Brightness control method - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏ရင့်ကျက်မှုနှင့်အတူ, ၏တောင်းဆိုမှု မြင်ကွင်းကျယ် LED ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသည်, monochrome ကနေ full-color အထိ. အောက်ပါ LED သည်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးကိုဖော်ပြထားသည်:
တစ်ခုက LED ကို ဖြတ်၍ စီးဆင်းနေသော current ကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်. ယေဘူယျအားဖြင့်, အဆိုပါ LED ပြွန်အကြောင်းကိုဖြစ်ဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်မစ်ရှင်လက်ရှိခွင့်ပြုပါတယ် 20 mA. အနီရောင် LED အပြည့်အဝမြင်ကွင်းတစ်ခုရှိပါတယ်မှလွဲ။, အခြား LEDs များ၏တောက်ပမှုသည်အခြေခံအားဖြင့်စီးဆင်းနေသော current နှင့်အချိုးကျသည်; သို့သော်, ဒီညှိနှိုင်းမှုနည်းလမ်းရိုးရှင်းပါသည်, ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်တောင်းဆိုမှု LED ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်မှုနှင့်အတူ, ၎င်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်။ တိကျသောမော်ဂျူးလ်အတွက်မသင့်တော်ပါ. အောက်ဖော်ပြပါသည်အသုံးများသော modulation method ဖြစ်သည်;
နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသွေးခုန်နှုန်း width ကိုမော်ဂျူဖြစ်ပါတယ် (PWM), သောလူ့မျက်စိခံစားရနိုင်သောပြောင်းလဲနေတဲ့အကြိမ်ရေကိုအသုံးပြုသည်, မီးခိုးရောင်ထိန်းချုပ်မှုကိုပြီးမြောက်ရန်အတွက်သွေးခုန်နှုန်းမော်ဂျူလာနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်, ဒါက, အခါအားလျော်စွာအလင်းသွေးခုန်နှုန်း width ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ (ဆိုလိုသည်မှာ, တာဝန်သံသရာ). နေသမျှကာလပတ်လုံးထပ်ခါတလဲလဲအလင်းရောင်ကာလတိုသည် (ဒါက, အဆိုပါပြန်ရေးအကြိမ်ရေမြင့်မားနှင့်အတူကျေနပ်သည်), လူ့မျက်စိသည်အလင်းထုတ်လွှတ်သောပစ်ဇယ်များကိုမခံစားနိုင်ပါ. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် PWM သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ပိုမိုသင့်တော်သောကြောင့်ဖြစ်သည်, ကကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. အများအားဖြင့် LED display ကိုထောက်ပံ့ရန် microcomputer ကိုအသုံးပြုသည်. ယခု LED ဖန်သားပြင်အားလုံးနီးပါးသည်မီးခိုးရောင်အဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန် pulse width modulation ကိုအသုံးပြုသည်.
LED control system ကိုယေဘုယျအားဖြင့် main control box ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် display ကိုထိန်းချုပ် device ကို. အဓိက control box သည်ကွန်ပျူတာ display card မှ screen pixel ၏တောက်ပသောအချက်အလက်များကိုရယူသည်, ပြီးတော့စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ဘုတ်တွေအများကြီးချထားပေးတယ်, တစ်ခုချင်းစီသောအများအပြားလိုင်းများကိုထိန်းချုပ်ဖို့အသုံးပြုသည် (ကော်လံ) LED မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ, နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီအတန်းအပေါ် LED display ကိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြမှုများ (ကော်လံ) အမှတ်စဉ်လမ်းအတွက်ကူးစက်နေကြသည်. အခုဆိုရင် display control signal ကို၏ serial transmission အတွက်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်: တစ်ခုကစကင်ဖတ်ဘုတ်ရှိ pixel တစ်ခုစီ၏မီးခိုးရောင်အဆင့်ကိုစုဆောင်းပြီးထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်. စကရင်ဘုတ်သည် pixel တစ်ခုစီ၏တောက်ပမှုတန်ဖိုးကို control box မှရပ်တန့်သွားလိမ့်မည် (i.e. သွေးခုန်နှုန်း width ကိုမော်ဂျူ), ထို့နောက်တစ် ဦး ချင်းစီလိုင်း၏ရှေးဟောင်း signal ကိုသွေးခုန်နှုန်းနည်းလမ်းက ဦး ဆောင်သက်ဆိုင်ရာမှ ဦး ဆောင်ပို့လွှတ် (အမှတ်အလင်းသည် 1, အလင်းကမဟုတ်ပါဘူး 0) မျဉ်းအရသိရသည်, နှင့် lit နိုင်ရှိမရှိထိန်းချုပ်ပါ. ဒီနည်းလမ်းကနည်းနည်းပစ္စည်းကိရိယာကိုအသုံးပြုသည်, ဒါပေမယ့်အမှတ်စဉ်ဂီယာအချက်အလက်များ၏ပမာဏကြီးမားသည်, ထပ်ခါတလဲလဲအလင်းရောင်သံသရာ၌ရှိသောကြောင့်, pixel တစ်ခုစီလိုအပ်တယ် 16 ပဲမျိုးစုံအောက်မှာ 16 မီးခိုးရောင်အဆင့်ဆင့်, နှင့် 256 ပဲမျိုးစုံအောက်မှာ 256 မီးခိုးရောင်အဆင့်ဆင့်. ပစ္စည်းကိရိယာများမစ်ရှင်ကြိမ်နှုန်းသတ်သောကြောင့်, ယေဘုယျအားဖြင့်သာ 16 မီးခိုးရောင် LED မျက်နှာပြင်ကိုရရှိနိုင်ပါသည်.
နောက်တစ်နည်းမှာ scanning board serial transmission နည်းလမ်းသည် LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုစီ၏ switch signal မဟုတ်ခြင်းဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့် 8-bit binary brightness value. LED တစ်ခုစီတွင်အလင်းချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန် Pulse width modulatorer ရှိသည်. ဒီလိုမျိုး, ထပ်ခါတလဲလဲအလင်းရောင်သံသရာ၌တည်၏, တစ် ဦး ချင်းစီ pixel သာတောင်းဆိုမှုများ4ပဲမျိုးစုံမှာ 16 မီးခိုးရောင်အဆင့်ဆင့်, သာ 8 ပဲမျိုးစုံမှာ 256 မီးခိုးရောင်အဆင့်ဆင့်, အရာသည်အလွန်အမှတ်စဉ်ဂီယာကြိမ်နှုန်းတိုးပွားစေပါသည်. LED မီးခိုးရောင်အဆင့်ကိုထိန်းချုပ်၏ဤနည်းလမ်းကိုအတူ, 256 မီးခိုးရောင်အဆင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုအလွယ်တကူပြီးစီးနိုင်ပါတယ်